Etu ị ga-esi Download Elu FLAC High Quality | Akụkọ akụrụngwa
Etu ibudata egwu FLAC dị elu n'efu
Paco L Gutierrez | | General, Foto na ụda, software
Naa ọ na-esiri ike ịkọwa nbudata egwu na ịntanetị, ugbu a ka enyere anyị ihe niile site na iyi egwu na-enweghị nbudata ọzọ ma ọ bụ mkpa maka ohere na ngwaọrụ anyị. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ihe anyị na-achọ bụ nke kacha mma? Ọfọn nke ọma ọ dịghị gụgharia ngwa nwere ike inye anyị na elu nke àgwà na anyị na-achọ ọ bụrụ na anyị chọrọ ịnwale ụda ma ọ bụ na anyị chọrọ itinye ya na nnukwu olu ihe. Na akụkụ nke a bụ n'ihi n'eziokwu na egwu sitere na ngwa dịka Spotify ma ọ bụ Apple Music abịakọrọ iji rie obere batrị na data karịa ọnụego anyị.
Otu n'ime usoro eji rụọ ọrụ iji nwalee akụrụngwa ụda ma ọ bụ maka mmemme bụ «FLAC». Hazie nke ahụ bụ n'ezie ọtụtụ na-erughị ewu ewu karịa MP3, ma sara mbara nke ukwuu na ụda dị mma, ruo n'ókè nke na mgbe anyị gụsịrị egwu FLAC, ọ ga-adị ka anyị ga-enwe ntị ruru unyi mgbe anyị na-ege MP3 ahụ ọzọ. Lee, anyị na-aga na-ezu ezu ihe FLAC music bụ banyere na ebe ị nwere ike ibudata music na a pụrụ iche format.
1 Gịnị bụ egwu FLAC?
2 Ebee ka ige egwu FLAC
3 Etu esi ebudata egwu FLAC
3.7 Enweghị ihe ọ bụla
3.8 Akwa Ntughari Audio
Gịnị bụ egwu FLAC?
FLAC bụ acronym maka Free Lossless Audio Codec, ihe ọdịyo Codec na-eme ka ọnụọgụ dijitalụ jikọtara na-enweghị ọnwụ. Faịlụ nwere ike belata ruo 50% nke nha ya na-enweghị mbenata ogo ya ma ọlị. Agbanyeghị na ọ nwere ike ịdị ka gị, ọ bụ usoro dị adị kemgbe ọtụtụ afọ ma bụrụ mmemme nke onye mmemme aha ya bụ Josh Colson mepụtara.
Ntọala Xiph.org na ọrụ FLAC nọ na-ahụ maka ijikọ koodu mkpakọ ọhụrụ a, otu onye na-ahụ maka ndị nrụgide ndị ọzọ dịka Icecast, Vorbis ma ọ bụ Theora n'etiti ndị ọzọ. Na May 26, 2013, La Luz hụrụ mbipute Flac nke 1.3.0.
Ọ bụrụ na anyị na-achọ ịchekwa ma chekwaa faịlụ egwu anyị na usoro dijitalụ, ụdị ịrụ ụka adịghị ya bụ nhọrọ kacha mma. Ihe kachasị mma bụ na ọ bụ n'efu na koodu ya bụ n'efu, yabụ enwere ike itinye ya na ngwaike na ngwanrọ ọ bụla.
Ebee ka ige egwu FLAC
Na-ege ntị ụdị ọ bụla nke ọdịyo faịlụ gị mkpa dakọtara software, ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ha ga-enwe ike mụta nwa a Codec. Anyị ga-eme nhọrọ nke mmemme ka ị nwee ike ịnụ ụtọ ọfụma kachasị mma n'oge ọ bụla.
Onye ọkpụkpọ dị mfe ma dịkwa mfe iji, ọ na-erepịa ihe ole na ole site na kọmputa anyị, ọ na-amata faịlụ faịlụ ọ bụla dịnụ na ịnwe. Ọ gụnyere ọtụtụ nhazi nhazi iji hazie ya ka ọ masịrị anyị, ọ gụnyekwara nchịkọta akụkọ mkpado na ihe ntụgharị faịlụ. Na-akwado redio redio. Anyị nwekwara ha maka iPhone ma ọ bụ gam akporo.
Developer: Artem Izmaylov
Ruo ndị kachasị ewu ewu, VLC bụ vidiyo na-emeghe emeghe na ọkpụkpọ egwu na usoro. Kwekọrọ n'Ozizi na ihe niile multimedia faịlụ. Ọ bụ ike mụta nwa codec stof na-enweghị ibudata ọzọ nchịkọta. Ọ na-enye anyị ike na-egwu multimedia faịlụ echekwara na ngwa anya format, dị ka DVD ma ọ bụ Bluray na mkpebi sitere na 480p ruo 4K. Ọ dị maka ha abụọ MacOS y Windows dika iPhone y android.
VLC maka gam akporo
A mechiri emechi iyi player na bụ kpam kpam free. Ọ bụ ihe ọkpụkpọ gbadoro anya maka ndị ọrụ ejiri ya na ọbá akwụkwọ dijitalụ dijitalụ ha na-atụgharị uche, ebe ọ nwere ọnụọgụ nhọrọ dị ukwuu anyị nwere ike tufuo onwe anyị Ọ nwere ike ịbụ nnukwu MacOS ọzọ na iTunes yana Windows. Ihe ngosipụta ahụ bụ ịrụ ụka adịghị ya na nhazi ahụ, ọ bụkwa otu n'ime ndị egwuregwu kachasị egwu anyị nwere ike ịchọta n'efu. Ọ nwere nsụgharị maka MacOS, Windows na mobile nsụgharị nke iPhone o android.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, i nwere ike nwalee Amazon Music Unlimited ụbọchị 30 n'efu jiri abụ karịrị nde 70
Etu esi ebudata egwu FLAC
Anyị na-aga ịhụ a nhọrọ nke a pụrụ ịdabere na weebụsaịtị ebe anyị nwere ike ibudata anyị music na FLAC format, ozugbo ebudatara anyị pụrụ ịnụ ụtọ ya na ihe ọ bụla nke Player kwuru n'elu.
Nke a online Portal na-expressly raara nye na-ebugote music ọdịnaya na FLAC format. O nwere otutu ihe mejuputara na ihe nile. Mana ihe kachasị mma na ntanetị weebụ a bụ n'ezie eziokwu na ọ nwere mma ihe niile masịrị, maka nke ị nwere uto ị nwere, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị ga-ahụ ihe ị na-achọ na nke kachasị mma. Ihe niile dị na weebụsaịtị a bụ n'efu. Ihe a na-ekele, ebe ọ bụ na anyị niile nwere mmasị na egwu dị mma mana anyị niile enweghị ike ịnweta ya site n'ịkwụ ụgwọ.
Ebe nrụọrụ weebụ nke Vietnamese, nke nwere otu n'ime nnukwu egwu egwu anyị ga-ahụ na ịntanetị na usoro FLAC. Ihe kachasị dị ịtụnanya bụ na enweghi ọdịnaya na ọdịnaya ya niile bụ n'efu ma ọ nweghị mgbasa ozi na-eduhie eduhie, yabụ nbudata ọba egwu kachasị amasị anyị dị mfe. Uru ọzọ nke weebụsaịtị a bụ na adịghị egbochi anyị n'otu usoro, ma na-enye anyị nnukwu akwụkwọ ntanetị nke nhọrọ ndị anyị nwere: MP3, M4A na n'ezie ndị elu-edu FLAC format. Mpempe akwụkwọ nke katalọgụ ya na-emesapụ aka ma ị nwere ike ịchọta egwu sitere na oge niile ma ọ bụ ọbụlagodi ihe nkiri na egwuregwu vidio.
Oge gboo music nwere ike ghara ịnọ na nke a nhọrọ, otu n'ime ndị kasị ewu ewu Genres na FLAC format. Na ngwa dị maka gam akporo nke na-enye nnukwu katalọgụ nke egwu oge gboo. Anyị nwere ike nweta symphonies na mezue albums na-enweghị nsogbu. Kporie onodu uzo di enyi na enyi, ya na igwe nyocha nke bara uru nke n’enye gi ohere ichoputa ihe nile ichoro ma chota ihe anyi na acho. Ihe ikpo okwu a na-enye ụbọchị 14 nke nnwale n'efu iji jiri ọdịnaya ya, oge a ị kwesịrị ịkwụ ụgwọ ndebanye aha kwa afọ nke € 140O nwere ike iyi ihe dị oke ọnụ ma ọ bụrụ na ị bụ onye hụrụ ụdị egwu a n'anya, ọ ga-abụrịrị na i tozuru oke penny ọ bụla.
Primephonic - Gụgharia Oge Ochie
Otu n’ime ndị ọzọ kachasị mma maka ndị hụrụ egwu kacha mma mma. A nzuzo online n'elu ikpo okwu na awade a nnukwu music n'ọbá akwụkwọ. Ọ bụ ezie na Ọ bụghị naanị na egwu ka anyị ga-enwe ike ịnweta vidiyo, akwụkwọ, ngwanrọ na ihe ọchị. Isi ihe na - ezighi ezi nke ntaneti weebụ a n’enweghị mgbagha na ị gaghị abanye n’enweghi ike, mana na ọ na - enweta ya site n’ikpọ oku sitere n’aka onye ọrụ. Ọ bụ ezie na anyị nwere nhọrọ ọzọ dị mfe karị na nke ahụ bụ na anyị nwere ike rịọ ajụjụ ọnụ banyere isiokwu metụtara egwuỌ bụrụ na anyị merie ya, anyị nwere ike ịdebanye aha maka Redactec wee budata ọtụtụ egwu.
Anyị rutere nhọrọ kachasị mma maka ọtụtụ rockers. Site na weebụsaịtị a anyị nwere ike ibudata njedebe nke egwu egwu na usoro FLAC nke ụdị egwu. Ọ bụ a kpam kpam free n'elu ikpo okwu na nwere a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke albums, otu, concerts na ndị ọzọ na ọdịnaya na FLAC format. Ihe omuma gi nile di na sava dika MediaFire ma obu Mega, ya mere nbudata dị mfe. Ihe kachasị mma na Portal a bụ na ọdịnaya dị kpamkpam n'efu, yabụ anyị nwere ike ịbawanye nchịkọta anyị ruo mgbe ebighi ebi na enweghị atụ egwu ụgwọ ndị ọzọ.
N'okwu a ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ na-akwụ ụgwọ, mana enweghị obi abụọ nke kachasị mma ma na-akwụghachi ụgwọ. Na mgbakwunye na inwe ike inweta music si a nnukwu collection, ị nwere ohere nke ịgagharị ụdị nile nke Genres, ihe ọ bụla format anyị chọrọ. FLdị FLAC nwere ọnụnọ siri ike yabụ enwere mmesi obi ike. Dị ka ihe ọzọ na anyị enweghị ike ịchọta ndị ọzọ, weebụsaịtị a na-enye anyị ohere iji ojiji nke ọdịnaya ya na-enweghị mkpa ịme nbudata ọ bụla, yabụ anyị nwere ike ige egwu ahụ ozugbo.
Enweghị ihe ọ bụla
Ebe nrụọrụ weebụ na-enye anyị otu n'ime akwụkwọ kacha mma na FLAC usoro nke ịntanetị niile n'efu. N'ime ndepụta gị anyị hụrụ ihe kariri 20 egwu di egwu ya na akwukwo a na-emelite kwa oge. Ọ bụkwa otu n'ime ibe ndị ahụ ihe ejiri mara ya bu inwe uzo di nfe, nke pụtara na anyị ga-enwe ohere kpamkpam akparaghị ókè na ihe gị na-enweghị akwụ ụgwọ otu €. N'ihu na nbudata nke ọba ọ bụla, chọọ ya naanị site na njin ọchụchọ gị, mepee ya ma gaa na njikọ njikọ ya.
Akwa Ntughari Audio
Ọzọ ugwo website, nke nwere nnukwu oba akwukwo juputara na egwu site na ihe omuma niile. Na-enye gị ohere inweta ihe ngosi na usoro anyị chọrọ. Ọ bụ ezie na ihe masịrị anyị bụ ọdịnaya FLAC na n'ọnọdụ a ọnụnọ ya dị oke. Ebe ọ bụ na ọ bụ ugbu a ka usoro kachasị amasị ndị niile hụrụ egwu egwu egwu egwu. Na nke a anyị na-ahụ a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke oge gboo music tracks na FLAC format. Ọ bụghị n'efu mana obi abụọ adịghị ya na anyị ga-ekwu na ọ dịghị mfe ịchọta ụlọ ahịa dị n'ịntanetị na egwu n'ụdị a pụrụ iche, nke dị mfe iji yana ịrụ ọrụ mara mma. Mentskwụ ụgwọ nwere ike ịbụ kwa afọ ma ọ bụ kwa ọnwa, Ya mere, anyị nwere ụlọ ọrụ mgbe ị na-akwụ ụgwọ nkeji nkeji.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Etu ibudata egwu FLAC dị elu n'efu
Xellence site X nke Kygo, nwere ANC na ụda dị egwu
Lelee GS Pro, sọpụrụ kacha "kacha elu"